Iyo Nyika Yakapikirwa: Inobatsira uye Sustainable Kushambadzira ROI Mberi Mberi | Martech Zone
Nyika Yakapikirwa: Inobatsira uye Inogadzikana Kushambadzira ROI Mberi Mberi
Chipiri, Gunyana 20, 2015 NeChishanu, Gumiguru 23, 2015 Katie Karr
Kugamuchirwa kune izvo zvigadzirwa zvekutengesa zviri kushevedzera Iyo Yevatengi Zvakaitika Era.
Na 2016, 89% emakambani anotarisira kukwikwidza pahwaro hwechiitiko chevatengi, vs 36% makore mana apfuura. Kunobva: Gartner
Sezvo maitiro evatengi uye matekinoroji ari kuramba achichinja, marongero ako ekutengesa zvemukati anoda kuenderana nerwendo rwevatengi. Zvinobudirira zvemukati izvozvi zvave kutungamirwa nezviitiko - riini, kupi uye sei vatengi vanozvida. Chiitiko chakanaka mune yega yega kushambadzira chiteshi ndiyo chete yakakosha kiyi kune ino shanduko.
Wedzera wakaongorora ichi chiitiko mune yavo ichangoburwa infographic, Kumisikidza Yako Yemukati Kushambadzira yeiyo Nyowani Nhandare: Kwevatengi Chiitiko. Iwo maonero akazara ekuti kushambadzira kwako kwemukati kunokanganisa sei ruzivo rwevatengi, uchipa matipi ekuti ungaitei kuti utengese zita rako
Zvinhu zvekukunda kwevatengi ruzivo zvinogona kupfupikiswa kuita matatu mazwi:
Ziva mutengi - Bvuma mutengi, nhoroondo yavo, uye zvavanofarira.
Rondedzera kumutengi - Tinya mune manzwiro, ratidza zvinhu zvavanofarira, uye usatambise nguva nezvinhu zvavasinga.
Usasiye mutengi akarembera - Ipa mhinduro dzinoenderana nenguva uye vatengi pavanenge vachizoda uye kupi.
Inobatsira uye inoenderera kushambadzira ROI inowanikwa. Tevedza nhanho idzi uye bhizinesi rako richakurumidza kupinda muNyika Yakapikirwa.
Tags: content managementContent Marketingvatengi vanozivadigitaalinen aseti manejimendiinfographicwedzera
Ini ndiri Mutapi venhau mukuru kuIUPUI ine tarisiro muRuzhinji Hukama uye mudiki muChiitiko Management. Parizvino ndiri kutora kuravira kwenyika yekutengesa seyese-wenguva yekudzidzira pa DK New Media. Anodada mudzidzi, mwanasikana, hanzvadzi, shamwari, uye imbwa-amai.